हाम्रा घरका बिरालाहरू दूधभात खान पाइन्छ कि भनेर म्याउ गर्दै टुप्लुक्क देउवाको भान्सामा पुगेका छन्:ओली - Naya Online
हाम्रा घरका बिरालाहरू दूधभात खान पाइन्छ कि भनेर म्याउ गर्दै टुप्लुक्क देउवाको भान्सामा पुगेका छन्:ओली
शनिबार, भदौ १९, २०७८ (September 4th, 2021 at 7:14pm ) राजनीति, समाचार
काठमाडौ, १९ भदौ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल लगायतप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एमाले बिकाउ माल नभएको बताए ।
राजधानीमा आयोजित वृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अहिले हाम्रा घरका बिरालाहरू शेरबहादुर देउवाको भान्सामा देखिन्छन् नि ! त्यस्ता होइन । दूध र भात खान पाइन्छ कि भनेर म्याउ गर्दै टुप्लुक्क पुगेछन् ।’ उनले पार्टीले जनप्रतिनिधि हुन लायकका उम्मेदवारहरू तोक्ने र उनिहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाउने पनि उनले बताए ।
ओलिले माधव नेपालको जिम्मा नै एमालेको बदनाम र चरित्रहत्या गर्नु रहेको बताए । उनले नेपाललाई वामपन्थी सरकार ढालेर, विरोधिको सरकार बनाउने आरोप लगाए । ‘मैले माधव नेपालजस्तो लाजसरम पचेको मान्छे जिन्दगीमा कहिँ पनि देखेको छुइन ।’– ओलिले भने ।
त्यस्तै, ओलिल गर्दै पार्टी नफुटेको बरु विगतदेखि झमेला गर्दै आइरहेका केही तत्व बाहिरिएको बताएका छन् । उनले माधव नेपाल समूह पार्टीमा वैचारिक द्वन्द्व नभइ केवल पदका लागि मात्र पार्टीबाट बाहिरिएको बताए ।
उनले भने, ‘कतिले भन्ने गरेका छन् एमाले फुटेको छ टुटेको छ, अझै ठुलो भुँइचालो जानेछ भनेर आस गरेका छन् । अहिले पाटी फुटेको हैन, पार्टीमा बिग्रिएकाहरू जो विगतदेखि नै पार्टीमा अनेक झमेला गर्दै आएका थिए ती चोइटिएका मात्र हुन् ।’ उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारको कुनै नीति नभएको र खानका लागि गएको आरोप लगाए ।
उनले भने–‘ यिनीहरू पञ्जावका लङ्गुर बाँदरका झुण्ड जस्तै हुन् । खानका लागि गएका झुन्ड हुन् । हाम्रो पार्टीबाट जानेहरूले कहिल्यै पाटीभित्र वैचारिक लडाइँ गरे ? नीति सिद्धान्त बिचारका केही फरक छ ? खाली मलाई यो पुगेन त्यो पुगेन भनेको छ ।’
उनले माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै भने–‘कहिले प्रधानमन्त्री बन्न पाउन भनेर राजाको वरिपरि दाम चढाएर हिँडेको छ, कहिले हुलाकबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनेर पत्र पठाएको पनि छ । यस्ता अनेक खालका तमासा गरिएको छ । २ सय ४० सिट भएको बेला पार्टीलाई ३३ सिटमा ल्याएर खुम्चाएको छ । मैले केही गर्न सकिन भनेर राजीनामा दिएको मान्छेलाई फेरी भाग चाहिएको छ । त्यस्ता केही तत्त्वहरू पार्टी छोडेर गएका हुन् ।’ उनले एमालेको सरकारले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा स्याटलाइट पठाएको बताए ।
उनले अहिलेको सरकारले आफूले शिलान्यास गरेको २ सय ६० सडक आयोजनाको रद्द गरेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै यो सरकार गरिबमारा रहेको बताए ।
भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले माधव नेपालले वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर प्रतिक्रान्ति गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने–‘अस्तिसम्म जुन खाटमा बसेका थिए अहिले त्यो भाँचेको भाँच्यै छ, जुन पिर्कामा बसेको छ त्यो भाँचेको छ । हिजो जुन मन्दिर बनायो त्यसमा थुकेको थुक्यै छ । माधव नेपाल जस्तो शरम पचेको मान्छे मैले अहिलेसम्म कतै देखेको छैन ।’ उनले विकासका लहर ल्याएको वामपन्थी सरकार ढालेर प्रतिक्रान्ति गर्ने र नेपाली काँग्रेसको एस पार्टी बनेको आरोप लगाए ।
उनले हिजो पार्टी फुटाउनुअघि गठबन्धनले माधव नेपाललाई लिएर पाँच पार्टीको गठबन्धन भनेको भन्दै माधव नेपाल मात्रै पार्टी रहेको बताए । उनले भोलि पनि माधव नेपाल मात्रै एकीकृत पार्टी रहने बताए ।
उनले एमाले पार्टी कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने धारा खोलेर देखाइदिन, नागरिक एप्स खोलेर देखाइदिन, फोर जी नेट चलाएर देखाइदिन आग्रह गरे । उनले मेलम्चीको पानी ल्याउन पनि एमाले चाहिने भन्दै आगामी निर्वाचनमा एमालेले चुनाव जितेर मेलम्चीको पानी ल्याउने दाबी गरे । उनले अहिलेको सरकार विकास विरोधी रहेको भन्दै यो सरकारले क्रेन ल्याएर धरहरा भत्काउन सक्ने, रानीपोखरीमा ढुङ्गा हाल्न सक्ने दाबी गरे ।